Soo dejisan Unlocker 1.9.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Unlocker
Unlocker – utility midnimo loogu talagalay in la files in ay hor istaag ku sameeyeen geedi socodka nidaamka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijka waa awooda in aad tirto faylasha iyo fayl kaas oo ku guuldareystay inuu la tirtiray sidii caadiga ahayd. Unlocker ku darayaa feature cusub si menu macnaha guud ee hababka qalliinka Windows in kuu ogolaanayaa inaad mamnuucidda in la files shaqeeyaan si ay kor. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fuliyaan inta badan la sameeyaa qaliin oo walxaha: bedelayaan, tirka iyo raritaanka. Sidoo kale Unlocker ogolaanaya in jadwal tirtirka file at reboot soo socda.
Rakibaadda in menu macnaha guud
Taageerada hawlaha caadiga ah
Kartida in la qorsheeyo takhalusid faylasha
Soo dejisan Unlocker
Faallo ku saabsan Unlocker
Unlocker Xirfadaha la xiriira
Software inuu ka soo kabsado shaqada adeegyo muhiim ah oo xuduudaheedu nidaamka. Software canaanto khaladaadka diiwaanka iyo nidaam faylasha u kharribmay.
ALLPlayer – qalab warbaahin badan oo leh qalab fara badan oo waxtar leh. Software-ka wuxuu taageeraa dib u soo celinta faylasha warbaahinta ee musuqmaasuqay, jaangooyooyinkii la dheereeyey ee qoraallada hoosta laga xariiray iyo qaabeynta faylasha fiidiyowga.